Nhau - Fekitori itsva yamiswa
Fekitari itsva yakagadzirwa
ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD. yatanga kuvakwa kwechirimwa chitsva, icho chinotarisirwa kupedzwa muna Zvita 2021. Chimiro chitsva chinofukidza nzvimbo ye15,000 square metres. inosanganisira mauriri maviri ewekishopu uye mana pasi ehofisi.
Mushure mekunge chirimwa chitsva chatangwa, Isu tichawedzera 1 more insulating glass production line, 2 doors assembly lines lines uye 10pcs extrusion mitsara. huwandu hunogona kuwedzerwa ne2 nguva. Uye isu tichagadzira dhipatimendi rekutsvagisa nekusimudzira, tsvakiridzo yakazvimirira uye kusimudzira yekutengeserana inotonhora cheni magirazi magonhi.
Deqing Yuebang Glass Co., Ltd igadziri ine makore anopfuura gumi nemashanu ruzivo mundima iyi uye inyanzvi mukugadzira nekugadzira marudzi ese ekutengeserana efiriji / girazi refiriji, gonhi regirazi uye epurasitiki extrusion profile. Girazi redu rinosanganisira 3 ~ 6mm girazi rakakomberedzwa, 3 ~ 12mm girazi rakatsetseka, 3 ~ 6mm rakakomberedzwa rakaderera E girazi, 3 ~ 4mm flat low E girazi, ITO girazi, yakadzikama girazi, sirika yekudhinda girazi, kupisa girazi. Etc.
Gonhi redu regirazi rinosanganisira plastiki furemu girazi gonhi, aluminium furemu girazi gonhi, ABS jekiseni furemu girazi gonhi, kaviri hasha girazi, katatu hasha girazi, yakaderera E girazi gonhi, kupisa gonhi regirazi, nezvimwe.
Zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa kuCanada, America, Australia, Japan, Thailand, Dubai, Malaysia, Saudi Arabia, nezvimwewo, mhinduro yakanaka kubva kune vatengi vedu. Isu tinogashira neushamwari mutengi wese kubva pasirese kuti atishanyire uye atange kubatana kunofadza uye kwakagadzikana.
Nguva yekutumira: Mar-22-2021